Barcelona Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaadhay Villarreal, Lionel Messi Oo Dhaawac Kale Soo Gaadhay Iyo Valverde Oo Culayskii Iska Fududeeyay. | Laacib.net
Barcelona Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaadhay Villarreal, Lionel Messi Oo Dhaawac Kale Soo Gaadhay Iyo Valverde Oo Culayskii Iska Fududeeyay.
September 24, 2019 Mohamoud Batalaale 1
Barcelona ayaa guul muhiim ah Camp Nou kaga gaadhay kooxda Villarreal laakiin Lionel Messi oo markii ugu horaysay xili ciyaareedkan shaxda Barca ku soo bilawday ayuu dhaawac soo gaadhay.
Inkasta oo Lionel Messi uu dhaawac ka soo laabtay uu waqti badan ku maqnaa, haddana xidiga reer Argentina ayaan qaybtii labaad ee kulankan ciyaarin waxaana Valverde iyo jamaahiirta kooxdiisa soo wajahay war kale oo aan fiicnayn.
Laakiin Valverde ayaa culayska iskaga yareeyay in kooxdiisa Barca ay guul 2-1 ah ka gaadhay Villarreal taas oo ay tubta guusha ugu soo laabteen.
Daqiiqadii 6 aad Barcelona ayaa markiiba heshay goolkeeda furitaanka kadib markii uu Lionel Messi caawintiisii ugu horeeyay u sameeyay Antoine Griezmann, wuxuuna ahaa gool kalsoonida u soo celiyay Barcelona.
Ciyaarta ayaa noqotay 1-0 ay Barca hogaanka ku qabtay balse ay wali ku raadinayeen goolal kale si ay ciyaarta u dili karaan balse kooxda martida ahayd ee Villarreal ayaa raadinaysay qaabkii ay ciyaarta dib ugu soo laaban lahayd.
Daqiiqadii 15 aad Barcelona ayaa xaalada ku xumaysay kooxda Villarreal kadib markii uu xidiga khadka dhexe ee Arthur Melo uu dhaliyay goolka labaad isaga oo caawin ka helay saaxiibkiisa Sergio Busquets.
Iyada oo rubuc kaliya ciyaartu socotay ayay Barcelona hogaanka ciyaarta ku qabtay 2-0 waxayna markale jamaahiirta Barca fisheen in ay kooxdoodu goolal badan dhalin karto.
Daqiiqadii 44 aad ee dhamaadkii qaybtii hore kooxda martida ahayd ee Villarreal ayaa rajadeeda soo boolaysay kadib markii uu Santi Cazorla awooday in uu dhaliyo goolka soo yareeyay farqiigii goolasha labada ahaa ee Barca wuxuuna caawin ka helay Iborra.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay Barcelona hogaanka ku haysay balse ay Villarreal ciyaarta rajadeeda ku soo noolaysay.
Xaalada Barcelona ayaa xumaatay kadib markii uu Lionel Messi dhaawac kale ku soo gaadhay kulankiisii ugu horeeyay ee uu shaxda Valverde ku soo bilawday waxaana qaybtii labaad kooxda la soo raaciyay Ousmane Dembele oo dhaawac ka soo laabtay.
Dhaawaca Lionel Messi ayaa niyadjab wayn ku ah Valverde iyo jamaahiirta Barcelona maadaama oo uu ahaa kulankiisii ugu horeeyay ee uu shaxda kooxda ku soo laabtay.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa noqotay mid ka duwan qaybtii hore iyada oo Villarreal dagaal ugu jirtay in ay ciyaarta ku soo laabto laakiin Barcelona oo wali raadinaysay goolkii ay ciyaarta iskaga dili lahayd ayayna xaaladu u fududaan.
Daqiiqadii 63 aad Valverde ayaa kaydka ka soo kiciyay Frenkie De Jong si uu khadka dhexe ugu xoojiyo wuxuuna saaray Sergi Roberto.
Waqti dheer oo laysla daalay ayuu Valverde go’aan ku gaadhay in daqiiadii 78 aad uu Luis Suarez oo aan xaalad fiican ciyaarta ku soo qaadan uu badlay wuxuuna kaydka ka soo kiciyay da’yarka Anssumane Fati.
Inkasta oo ay Barca fursado u abuuraysay sidii ay hogaankii labada gool ahaa u soo ceshan lahayd, haddana Villarreal ayaa si adag ugu dagaalamaysay in ay ciyaarta si buuxda ugu soo laaban karto.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Barcelona guul ku gaadhay isla markaana ay tubta guusha ugu soo laabtay taas oo culayska ka yaranaysa Valverde oo xaalad aan fiicnayn ku soo jiray maalmihii la soo dhaafay.
Barcelona Oo War Ka Soo Saartay Dhaawaca Cusub Ee Lionel Messi & Seddexda Kulan Ee Uu Seegi Doono
Carles Puyol Oo Iska Diiday Inuu Agaasime Ka Noqdo Barcelona & Sababtii Uu Diiday Oo Uu Twitter Ku Soo Qoray
One response to “Barcelona Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaadhay Villarreal, Lionel Messi Oo Dhaawac Kale Soo Gaadhay Iyo Valverde Oo Culayskii Iska Fududeeyay.”
Aragtideedu waxay tahay inaan arkayo wax fiicneyn lionel messi